Ranomisy any Thailand ~ Journey-Assist - Pitahaya, Pitaya. voankazo
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Voankazo any Thailand » Ny hazom-borona any Thailand
Dragon Fruit (anarana Thai ho an'ny manga mangatsiaka Geow)
Ranom-boankazo na Pittaya na Pitahaya dia fahagagana niavaka tany Thailandy. Na izany aza, dia mitsoaka avy any Aostralia izy, ary miaina ankehitriny ary mivelona any Aostralia, Meksika, any amin'ireo firenena any Amerika Atsimo ary amin'izao fotoana izao dia saika ny firenena any Azia Atsimo Atsinanana.
Nahazo ny anarany izy io ho fankalazana ny fitoviana ny hodiny ivelany sy ny lanjan'ny dragona. Ity voankazo ity dia mahagaga ... (sary hanaporofoana)
Mahagaga fa ny voankazo dia ny voankazo misy ... kaktus. :).
Ao Thailandy, ny voankazo matanjaka indrindra dia misy menaka fotsy, nefa koa hita amin'ny pulpà.
Mba hanandrana sy tsy miovaova, ny voankazo dragona dia mitahiry amboômbra maimaika miaraka amin'izay. Somary mamy, tsy mamirapiratra. Ny ranom-boakan'i Pitahaya sy ny pulpà dia ampidirina amin'ny famoronana zava-mamy, gilasy, sorbetes. Famangiana, sosy, jelly, lasopy dia masaka ao anaty pulp. Any Thailandy, io voankazo io matetika dia ampahany amin'ny zava-pisotro mahamamo marobe.
Ny vidin'ny voan'ny dragona any Thailand
Ny vidin'ny kininina dia 50-70 baht isaky ny kg amin'ny vanim-potoana ary 40 baht isaky ny vanim-potoana.
Vanim-potoan'ny Ranom-borona any Thailandy,
Azo lazaina izany fa ny hazom-borona dia amin'ny taona, fa ny vokatra be indrindra amin'ny fahavaratra, manomboka amin'ny volana jona ka hatramin'ny Aogositra.
Ahoana ny mifidy voankazo dragona
Ny volon'ilay voankazo dia tokony ho mavokely mavokely sy madio.
Mitsingevana maitso amin'ny toro-hevitra na maintso maintso.
Raha mavo na volontsôkôlà, na ny voankazo na masaka na menaka.
Ahoana ny fomba hazavahana ny voan'ny dragona
Tsy dia misy olana amin'ireto.
Esory ny flakes ary sasao ny voako.
Izahay dia manelingelina ho efatra, ary mihinana amin'ny tanana fotsiny. (raha tsy efa peel, mazava ho azy)
Azonao atao ny manonitra ny voankazo amin'ny antsasaky ihany ary mihinana ny pulp miaraka amina sotro kely.
Ny tombony azo amin'ny voankazo dragona
Ny voankazo dia tena mahasoa amin'ny digestive tract. Manamaivana ny fanaintainan'ny vavony.
Mahasoa ho an'ny olona voan'ny diabeta
Ampiasaina mavitrika amin'ny fisorohana sy fitsaboana ny aretina amin'ny endocrine izy io.
Fampiharana mahasoa eo amin'ny rafitra cardiovascular.
Miaraka amin'ny fampiasana mavitrika dia mandrisika ny fanamafisana ny hery fiarovana.
Ny voankazo dia misy otrikaina C, B1, PP, B2, B3.
Ny mineraly koa dia misy - phosphore, vy, kalsioma.
Pitaya dia alikaola, ka tokony hahalala tsara izany.
Aza manararaotra ny fampiasana voankazo dragona ho an'ny olona manana kibo malemy. Amin'ny habetsaka lehibe dia mety ho lasa provocateur amin'ny aretim-pivalanana na aretin-kibo.
Amin'ny ankizy kely, ny diathesis sy ny rash dia mety hiteraka azy.